Weerar Khasaaro sababay oo ka dhacay Magaalada Wajeer – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Weerar Khasaaro sababay oo ka dhacay Magaalada Wajeer
MAREEG 7 June 2015
Ugu yaraan 2 Ruux ayaa ku dhimatay, 2 kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii Rag hubeysan oo lagu tuhmayo Kooxaha ka Dagaalama Soomaaliya ay weerar ku qaadeen Magaalada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari Dalka Kenya.
Weerarkan oo ka dhacay Nawaaxiga Isbitaalka Samad ee Magaalada Wajeer ayaa la sheegay in lagu beegsaday Dad aanu daganeyn Magaalada islamarkaana ka yimid meel kale.
Dadka Degaanka qaarkood oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in maqleen dhawaqa rasaas Culus waxayna intaasi ay ku dareen in Magaalada uu ka dhacay iska horimaad Culus oo qaatay muddo 1 Saac ah .
Labada ku dhaawacantay Weerarkaasi ayaa loo qaaday Isbitaalka Magaalada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari Dalka Kenya halkaasi oo Xaaladood caafimaad lagu dabiibayo.
Illaa iyo hada majirto wax hadal ah oo ka soo baxay Saraakiisha Dowladda Kenay ee ku aadan weerarkaasi inkastoo Degaanada dhaca Gobolada Waqooyi Bari ee Dalkaasi uu ku soo noq noqday Weeraro kala duwan oo geysta khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ahlusuna oo saaka dagaal kula wareegay degmada Dhuusa Mareeb
Ciidamada dowladda ee laga saaray Dhuusa Mareeb oo gaaray degmada Cadaado